नेपालमा सहरी व्यवस्थापनका चुनौती
सहर आर्थिक वृद्धिका इञ्जिन हुन् । सहरहरु सेवा, सुविधा, सुरक्षा र अवसरको केन्द्र हुन् । सहरमा रहने यी विशेषताहरुका आधारमा नै सहरहरु गाउदेखि भिन्न हुन्छन् । सहरी आकर्षण बढ्नुका पछि पनि यिनै तत्वहरु रहेका हुन्छन् । सहरमा रहने यिनै कुराहरुले नै विकास गतिविधि र जनसाङ्ख्यिक संरचनालाई गतिशील बनाएको हुन्छ । सहर संस्कृति र सभ्यताको धरोहर पनि हो । विविधखाले विचार, संस्कृति, धर्म र भाषालाई सहरले आफूमा उन्नयन गरेको हुन्छ । त्यसैले समावेशी समाज निर्माणमा सहरहरुले रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । नेपालका सहरहरु पनि यी विशेषता र प्रक्रियाबाट अपवाद छैनन् । तर नेपालका सहरहरुले केही गम्भीर चुनौतीहरु सामना गरिरहेका छन्, जसले सहरलाई व्यवस्थित बनाउन दिनप्रतिदिन जटिलता थप्दै लगेको छ ।
सहरी पूर्वाधार र सेवा संरचना
नेपालका सहरहरुमा सामान्य सहरी सेवा उपलव्ध गराउने पूर्वाधार संरचनाको विकास पर्याप्त मात्रामा हुनसकेको छैन । न्यूनतम पूर्वाधार संरचना विकास नगरीकन सहर बनाउनुहँुदैन । तर नेपालमा ‘स्वचालित दबाब’का रुपमा बस्ती विकास हुने र त्यही बस्ती सहर कहलिने प्रवृत्तिमा देखिएका छन् । जसले गर्दा सहरका आधारभूत चरित्रहरु सहरमा नदेखिएका मात्र होइनन् कि सहरको मौलिक सुन्दरता र स्वरुप पनि बिग्रिएको छ । सहरले धान्नै नसक्ने गरी मानव बस्ती विस्तार भएको छ । आधारभूत सहरी सेवाका अभावमा सहरको जनजीवन जोखिममा पर्दै गएको छ । दुई दशक अघिसम्म काठमाडौं सहरले खानेपानी, यातायात, बिजुली र सरसफाइ सेवा मुस्किलले उपलब्ध गराउनसक्थ्यो । त्यही पूर्वाधार संरचनाभित्र चार दोब्बर जनसङ्ख्या थपिएको छ । दशवर्षे द्वन्द्वका समयदेखि सुरक्षित वासस्थानका खोजीमा मुलुकका विभिन्न भागबाट मानिसहरु ओइरिए । परिणामतः सहरी जटिलता थपिँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगारी र राजनीतिक घटनाक्रमले पनि काठमाडौंमा जनघनत्व थपिएको छ । काठमाडौं मात्र होइन, यो प्रमुख प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । अन्य सहरहरुको स्थिति पनि यस्तै छ । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उच्च क्षमताको माग सहरी क्षेत्रले गरिरहेको छ । किनकि ‘भर्जिन सहर’लाई व्यवस्थित गर्न जति सजिलो छ, हाम्रा सहरलाई व्यवस्थित बनाउन झनै गाह्रो छ । त्यहाँ कानुनी, व्यावहारिक र मानवीय समस्याहरु जेलिएका छन् ।
सामान्य सहरी सेवा संरचना विस्तारपछि कुनै पनि सहरले आफ्नो पहिचान कायम राख्न विशिष्ट सेवा संरचनाको माग गर्दछ । जस्तो कि पोखराले पर्यटन सेवा, जनकपुरले धार्मिक सेवा, पाटन र भक्तपुरले पुरातात्विक सेवा, नमोबुद्धले बुद्ध संस्कृति आदि । सबै सहर स्वच्छ हुनुपर्छ, तर पर्यटनको मन जित्न पोखराजस्ता पर्यटकीय सहरहरुमा होटेल व्यवसाय, बैंक, यातायात, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, साहसिक खेल, भरपर्दो सुरक्षा, सञ्चार आदि सेवाको माग हुने गर्दछ । जनकपुरजस्ता धार्मिक सहरमा मठ–मन्दिर, फूलबारी, स्नानघर, धर्मशाला, भजन–कीर्तन गर्ने स्थानजस्ता संरचना आवश्यक हुनसक्छ । तर नेपालका सहरहरु सामान्य सहरी सेवा पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने अव्यवस्थित जनचापमा फस्दै गएका छन् ।
नीति संरचना र मापदण्ड
सहरका आफ्नै नीति मापदण्डहरु हुन्छन् । घर, बस्ती, रहनसहन, सवैका आआफ्नै नम्र्स र स्टाण्डडर््स हुन्छन्, जसलाई व्यवस्थित रुपमा अवलम्बन नगरीकन सहर सहरका रहन सक्तैन । सहर भनेकै जनजीवनलाई सुसंस्कृत र आधुनिक बनाउने मूल्य÷मान्यताको प्रणालीबद्ध अवलम्बन हो । यस आयामबाट नेपालका सहरहरु कति व्यवस्थित भए त ? पहिलो कुरा नेपालमा सहर भनेर राजनैतिक रुपमा सीमाबद्ध गरिएको बस्ती हो । सहर भनेर राजनैतिक रुपमा घोषणा गरिएका नगरापालिकालाई लिने गरिएको छ । यसर्थ हाम्रो चलन सहरी पूर्वाधार विकासविना राजनैतिक सहर बनाउन केन्द्रित छ । सहर घोषणा गर्ने मापदण्ड छैन । कानुनले भनेका सीमित मापदण्डलाई पनि राजनैतिक सहजताका आधारमा मिच्ने गरिन्छ । प्राविधिक रुपमा हेरिँदैन । नगरपालिका बनेका बस्तीहरुले न्यूनतम पूर्वाधारहरु विकास गर्न त्यत्तिकै सक्तैनन् तर सहरवासीहरुको आकर्षण र अपेक्षा भने थपिँदै जाने गर्दछ ।
सहरी नीति एकीकृत हुनुपर्दछ । मापदण्ड घोषणा गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नियमन गर्ने, वित्त व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यहरुको एकीकृत आधार हुनुपर्दछ । शिक्षासम्बन्धी काम शिक्षा मन्त्रालयले, ढल र खानेपानीसम्बन्धी काम सहरी विकास मन्त्रालय र सडकसम्बन्धी काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले, सहरी मापदण्ड निर्धारण नगर विकास समिति र त्यसको कार्यान्वयन नगरपालिकाहरुले सम्पादन गर्दा आआफ्नै आग्रह र सहजताको सिद्धान्तलाई अपनाइएको छ । सहरी सुशासनको नेतृत्व भने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लिएको छ । कार्यकारी भूमिकामा स्थानीय सरकार वा नगरपालिकाहरु छन् । सबै निकायबाट हुने कामको एकीकृत समीक्षा प्रणाली पनि व्यवस्थित छैन । छरिएका नीति, कार्यक्रम, छरिएका स्रोत र कमजोर क्षमता एवम् औपचारिक कार्यप्रणालीले सहरहरु कुरुप बन्नेतर्फ अभिमुख छन् ।
सहरी विकासका सन्दर्भमा धेरै निकायहरु कुनै न कुनै काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारी विभागका तहगत संरचना र शाखाहरु, गैरसरकारी क्षेत्रका निकायहरु, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु, सामुदायिक संघ÷संस्था र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आआफ्नै क्षमता र कार्यआधारमा सहरी विकासमा योगदान दिइरहेका छन् । वास्तवमा सहरी व्यवस्थापनको केन्द्रविन्दुमा नगरपालिका रहन्छ र यसको प्रशासनिक क्षमता र राजनैतिक नेतृत्व जति सक्षम र क्रियाशील छ, त्यसैको आधारमा सहर व्यवस्थित हुने गर्दछ । नेपालका नगरपालिकाहरु योजनाबद्ध कार्यक्रम व्यवस्थापनमा मात्र होइन, सामान्य सेवा व्यवस्थापनमा पनि निकै कमजोर देखिएका छन् । लामो समयदेखि राजनैतिक नेतृत्वको अभावमा सहरी व्यवस्थापनले समस्या भोग्यो, केहीअघि चुनाव त भयो, निर्वाचित प्रतिनिधिहरु प्रणाली, स्रोत साधन र नीति संरचनाका अभावमा अल्मलिएका छन् । काम गर्ने आकांक्षा त छ तर क्षमताविना त्यो आकांक्षा वास्तविकतामा अनुवाद हुनसक्दैन । अनभवी मेयरहरु विगतको अनुभवका आधारमा काम गर्न तम्सिएका छन् तर अनुभव नभएकाहरुलाई क्षमता कसरी दिने ? नगरपालिकाभित्र स्थानीय कर्मचारीतन्त्रको बोलवाला व्यवस्थापनको अर्को समस्या हो । कर्मचारी समायोजनमा पनि जटिलता देखिएको छ ।
वित्तीय स्रोत परिचालन
सहरलाई व्यवस्थित गर्ने आवश्यक पूर्वाधार संरचना तथा सेवा सुविधा वितरणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न नगरपालिका निकै कमजोर छन् । संविधानले स्रोत परिचालन गर्ने आधार र स्रोत हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छ । तर औद्योगिक व्यापारिक क्रियाकलाप र सेवा व्यवसाय जति विस्तार भयो, सोही अनुपातमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकिने हो । अधिकांश नगरपालिकाहरुमा आर्थिक गतिविधिहरु गतिशील छैनन् । प्राप्त वित्तीय स्वायत्तताको उपयोग गर्न पनि नगरपालिकाहरु क्षमतामा देखिएका छैनन् । पहिलो त नागरिकलाई कर लगाउनभन्दा पनि वितरणमुखी काम गर्न नगरपालिकाहरु उद्यत भएको पनि देखिएको छ । दोस्रो परिचालन गर्नसकिने राजस्वको पहिचान पनि गर्न सकिएको छैन । तेस्रो स्रोत परिचालनभन्दा पनि केन्द्रबाट अनुदान लिन पाए हुने मनोविज्ञानमा निर्वाचित प्रतिनिधि देखिएका छन् । चौँथो नगरपालिकाले गर्नुपर्ने विकास गतिविधि धेरै भए पनि प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएकोले वित्तीय दिगोपना कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने जटिल चुनौती पनि छ । यसर्थ नगरपालिकाहरुको कमजोर आर्थिक क्षमतामा सामान्य प्रशासनिक कार्यतिर केन्द्रित हुँदै जाने सम्भावना छ ।
सहरीकरणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन दृष्टिकोणको खाका आवश्यक छ । तर नेपालमा यस प्रकारको रणनीतिक दृष्टिकोणतर्फ विचार गरिएको छैन । जहिले बिमारी, त्यही बेला उपचारको प्रवृत्तिले सहरी व्यवस्थापनलाई तदर्थ बनाएको छ । परिणामतः सहरहरु व्यवस्थापनयोग्य बन्न छाडिसके । निर्वाचित प्रतिनिधिहरु योजना बनाउन लागेका छन्, तर विज्ञहरुको बढ्दो बजारीकरण भइरहेको छ, जसले कार्यान्वयनयोग्य योजनाभन्दा पनि सैद्धान्तिक कार्य हुनसक्ने स्थिति छ ।
सहरी संस्कृति र व्यवहार
सहर सभ्यता र राम्रा व्यवहारको पनि केन्द्र हो । सहरको अपेक्षा र आवश्यकता सुसंस्कृत र सभ्य व्यवहार हो । पूर्वाधार संरचना र ठूला महलले मात्र सहरको पहिचान दिँदैन । सबल संरचना र असल व्यवहार नै वास्तविक सहर हो । सहरको सभ्यता गाउको पनि आदर्श (मोडेल) हो तर नेपालका मोफसलका सहर मात्र होइन, राजधानीको स्वरुप पनि सहरी संस्कृति विमुख देखिएको छ । सर्वसाधारणहरु सहरी संरचनाको अव्यवस्थित उपायोग गर्न मात्र होइन, अतिक्रमण गर्न पनि उद्यत छन् । सडकपेटी बजार टहराहरुबाट अतिक्रमित छन्, सडकको बीचबाट मानिस हिँड्नु सामान्य हो । आलिशान महलबाट फोहोरमैला मलमूत्र जथाभावी फाल्न सहरवासी लजाउँदैनन् । सडकबीचमा यात्रु चढाउने ओराल्ने जोखिमयुक्त काम यातायात व्यवसायीले गरिरहेका छन् । उछानापछिनबाट सडक दुर्घटना सामान्य देखिएको छ । यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यसले सहरवासी अधिकारप्रति सचेत तर कर्तव्यप्रति विमुख बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ । नियामक निकाय पनि कमजोर छन् । नियामक निकायको सक्रियाताभन्दा पनि मनोवृत्ति परिवर्तन आवश्यक छ । यसर्थ सहरी संस्कृतिको अभिमुखीकरण सहरको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यसलाई सम्बोधन नगरी गरिएको कुनै पनि कामले दिगो सहरी व्यवस्थापनमा समस्या मात्र सिर्जना गर्दछ ।
नेपालमा सहरीकरणको क्रमका साथ व्यवस्थापनका चुनौती पनि थपिएका छन् । सीमित रुपमा विस्तार भएका सडक तथा विद्युत् सञ्जालले सहरीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रतर पारिरहेको छ । सहरमा तान्ने तथा घचेट्ने तत्वका कारण मानिसहरु ओइरिने क्रम बढ्दो छ । विप्रेषण आयले पनि जिल्ला सदरमुकाम र उदीयमान सहरहरुमा जनचाप थपिरहेको छ । तर आधारभूत सहरी सेवासुविधा प्रदान गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । सहरी भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरुमा क्षमता विकास, समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा पनि सहरहरु सहज र सरल सेवा प्रवाहमा कमजोर देखिएका छन् । आउँदा दिनमा यो चुनौती झनै विकराल हुँदै जाने सम्भावना छ । त्यसैले सहरी विकासका सबै आयामहरुलाई एकीकृत रुपमा लिएर कार्य जिम्मेवारीको परिभाषा गर्नु आवश्यक छ । जति विलम्ब त्यति नै जटिलता देखिने भएकाले पनि सहरी विकासको एकीकृत कार्यप्रणाली शीघ्रातीशीघ्र स्थापित गर्नुको विकल्प छैन । (mainaligopi@gmail.com)